अजम्बरध्वज भन्छन् – ‘सुनचांदी भन्दा साहित्यीक सिर्जना धेरै महंगा छन् ’-Nagarikaawaj.com
‘साहित्य सिर्जनामा चरम आनन्द छ ’ बरिष्ठ साहित्यकार खाती
कपिल ज्ञवाली/बुटवल ।
पाल्पा जिल्लाको तानसेन १० गैरागाउमा बिस. १९९२ मा जन्मेर रुपन्देहीको बुटवललाई कर्मथलो बनाई साहित्यीक जीवनमा रमाईरहेका एक पात्र हुन् अजम्बरध्वज खाती । उमेरले ८१ बर्षमा पुगिसकेका उनी निकै मेहनती र फुर्तिला पनि छन् । नामजस्तै अजम्बरी उनको स्वभाव पनि छ ।
बुवा टेकध्वज र माता लक्ष्मीदेविका ४ भाइ र ४ बहिनीका बिचका माइला सन्तान अजम्बरध्वजले दुइ बिहे गरेका छन् । उनका जेठी श्रीमती कल्पनाबाट २ छोरा २ छोरी(जेठो छोरा बितेका),कान्छी चम्पादेबि (स्वर्गिय) बाट १ छोरा र १ छोरी समेत छन् । १२ कृतीका मालिक उनी उमेरका हिसाबले बृद्ध भएपनि उनका कृतीहरु र साहित्यीक जीवनभने निकै लोभलाग्दो र सबैका लागि अनुशरणीय छ,र ती कृतीहरु हेर्दा उनी युवापुस्ताकै प्रतिनिधित्व समेत गर्दछन् । नागरिक आवाज डटकमका प्रधान सम्पादक कपिल ज्ञवालीले उनै खातीसंग गरेको अन्तरंग कुराकानी ।
१.साहित्यसंग तपाइको सम्बन्ध कसरी जोडियो ?
मलाइ खास पढ्न आएन,मेरो रुचि खासमा गीत लेख्ने र गाउने थियो । सानैदेखि मैले गाउमा गाइ,भैसी,बाख्रा चराउने,खेती किसानी गर्ने र गीत गाउदै रमाउने गर्दथें ।मेरो पहिलो प्रेम गीतसंग भयो । ‘भगवानले एउटा ढोका बन्द गरे अर्काे खोल्दछन्’ भनेझैं मलाइ खेतीकिसानीको ढोका भगवानले खोले ।
४ भाइ ४ बहिनी मध्ये सबै फरकफरक पेशामा छन् । म मात्र यहि पेशामा लागें ।र गीत लेख्दै गाउदै गर्दा कविता लेख्न थालें । पछि धरै कृती लेख्ने अबसर पनि मिल्यो ।
२. पुरै जीवन साहित्यमै बिताउनुभयो ,यदि यता नलाग्नुभएको भए के गर्नुहुन्थ्यो ?
मैले बिचमा पढांए पनि । २०१२ देखि १८ सम्म जनता बिद्यालयमा पढाए । मैले त्यहिबाट हाइस्कूल पास गरेको थिए ।ताहुंमा रहेको रम्भादेवी हाइस्कुलमा पढाएर पाएको पैसा पार्टीलाइ नै जान्थ्यो । मैले मास्टरी नै गर्थें होला ।
३.तपाइ पार्टीको होलटाइमर हुनुभयो तर किन राजनीति गर्नुभएन ?
हो,म कम्युनिष्टको राजनीति गथें ,मैले कमाएको पैसा पनि पार्टीले नै लान्थे । पाल्पामा पढाएको सबै पैसा व.पार्टीलाइ नै भयो । मैले किसान संघमा काम गरें पछि राजनीति भन्दा साहित्य मन पर्यो ।
यता लागें उता लागिन र मेरो स्वभाब पनि राजनीति गर्ने छैन,थिएन ।मैले बिएसम्म पढें तर सिध्याउन पाइन।
४. तपाइलाइ कविता मन पर्छ अरु बिधा ?
मैले सबैभन्दा धेरै माया कवितालाई नै गर्छु ,धेरै लेख्ने पनि कविता नै हो ।साहित्यमा कवितामा हुने तागत अरुमा देख्दिन ।मैले १२ कृती लेखें अधिकांश कविताका नै छन् । गीती कविता मन पर्छ । मेरो पहिलो गीत संग्रह बटुवा २०१२ सालतिर लेखें ।धेरै लेखें केहि हराएपनि ।
५.लेखेका सिर्जनाहरु कति सुरक्षित छन् ?
छैनन् ,धेरै त गायब छन् । कति लेखें कति । हराए पनि उस जमानामा लेखेका चिज सुरक्षित गर्न पनि त निकै गाह्रो थियोनी ।अ‍ैले जस्तो प्रबिधि थिएन ।अ‍ैले मेरो नाती शुभ सापकोटाले सबै सहयोग गरिदिन्छ मलाइ ।
अहिले लेखेका सबै सुरक्षित छन् ।
६.तपाइका सिर्जना सुनेर प्रतिक्रिया कस्ले दिन्थ्यो र यसरी निरन्तर लागिरहनुभयो ?
आफ्नै कविता आफैलाइ सुनाउथें,कस्ले सुनिदिनु कैलेकांही श्रीमतीलाइ सुनाउथें ,पैले–पैले साहित्यीक कार्यक्रम पनि त हुन्थेनन् नी ।गाइ बाख्रा चराउन जांदा कति साथीलाइ पनि सुनाउथें उनीहरुकोे प्रोत्साहनले यहासम्म आएं ।
७.तपाइ त मध्यम परिवारको मान्छे तर १२ कृतीको मालिक हुनुहुन्छ केके कृती लेख्नुभयो ?
दुख सुख कृती निकालेकै छु ,मेरो नियमित कमाइ केहि छैन ,पुर्खाको कमाइने बांचेको छु । २०१६ सालतिर तराइमा खेती गर्न भनेर बटौली झरेको हुं ।धान चामल पुर्खाकै कमाइले खांदैछु ।
प्रकाशित कृतीहरु ।
 बटुवा (कविता संग्रह २०१२)
 कथा त बटौलीसंग छ (लामोकविता २०५८)
 ठूली (खण्डकाब्य २०५९)
 अझै खंैजडी बजेको बज्यैछ (खण्डकाब्य २०६१)
 पाइलाका डोबहरु ःसारंगीका बाडुलीहरु(कविता संग्रह २०६१)
 आ“सु बेनीको (खण्डकाब्य २०६२)
 खरानी गंगा(खण्डकाब्य २०६५)
 उद्बोधन (खण्डकाब्य २०६५)
 माइली (खण्डकाब्य २०६७)
 तपस्विनी (महाकाब्य २०६९)
 मेरो पाल्पा (लामो गद्य कविता २०७१)
 सरम हराएको सहर ( कविता संग्रह २०७२)
७.कुन् समयमा यस्ता कृती सिर्जना लेख्नुहुन्छ ?
खासगरि रातीमा मन्मा धेरै कुरा खेल्ने ,अनि उठेर रात भरीनै कविता लेख्ने भावनाहरु कोर्ने गर्छ । परिस्थिती अनुसार कलम चलाउने गरेको छु ।
८.तपाइको कान कसरी बन्द भए ?
खै म पनि दङ्ग छु । म बहिरो छु अ‍ैले केहि सुन्दिन (कान बताउदै) अ‍ैले यही मेसिनका भरमा सुन्ने गरेको छु ।(हेयरिङ सिस्टम)
एक्कासी कान थुनिएछन् मलाइ मैले सुन्दिन भन्ने नै कति बर्षसम्म थाहा नै भएन ।अ‍ैले काठमाडौमा इन्डियन शिबिर आएको बेलामा किनेर ल्याएको यो मेसिन लगाउछु । उनले सुनाए ‘तपाइहरु आउदा मात्रै लगाउछु,बाहिर हिड्दा पनि कैलेकसो लगाउछु नत्र मलाइ घरमै बस्दा यो लगाउनु पर्र्दैन,एक्लै किन लगाउनू,श्रीमतीले इसारानै बुज्छिन् ’‘बाहिरी हल्लाले कान धुम्म हुन्छ,यसलाइ ६२ हजार परेको हो ।’
९. कानको समस्याले झन् साहित्यलाइ थप मदत पुगेको होला नी , कल्पनामा रमाउन सजिलो भयो नी है ?
हो,मैले अरुको कुरै सुन्न नपरेसी मलाइ झन् मजा,साहित्यमा चरम आनन्द छ । एकोहोरिनै परेन २४ सै घण्टा बहिरोलाइ आफ्नै तालमा लेख्न पढ्न ठिक हुदो रैछ । ‘मलाइ त ठिकै भएको छ तर म बहिरो हुंदा साथीभाइहरुलाइ गाह्रो भएको छ ।’सारा संसार नै शान्त भएजस्तो अनुभुति हुन्छ ।
१०. नेपाली साहित्यलाइ कसरी बुज्नुभो ?
साहित्य सत्य ,शिब र सुन्दरको संगम हो ।साहित्यको आफ्नै कल्पनाले संसारलाइ परिभाषित गर्छ ।साहित्यले मानिसको भौतिक क्षमता बढाउछ ,कला ,अभिब्यक्ति,लेखन,शब्द चयनले गर्दा ती सबैलाइ टीप्दा जुन कुरा पनि जीवन्त हुन्छ । समाजका घटना र आकर्षणलाइ जोडेर साहित्य सिर्जना हुन्छ ।
साहित्य देश र समाजको ऐना पनि त हो ।साहित्य धनी हुने देश पनि धनी हुन्छन् ।
११.नेपाली साहित्यमा मेहनत बढि आम्दानी कम जीवन कसरी चलाउने ?
समस्या त बहुत छन् । दुःखछ , कारण पनि छन् । तर नेपाली साहित्यको प्रभाब बिश्वभरी नै छ । भानुभक्त, लेखनाथ, बीपि, मोतिराम, लक्ष्मीप्रसाद, माधबप्रसाद घिमिरे सबैका सिर्जना कति महंगा छन् ।
उनीहरुकै कारण नेपाल चिनिएको पनि त यर्थाथ हो नी ।सुनचा“दी भन्दा साहित्यीक सिर्जना धेरै महंगा छन् ।
१२. सबैभन्दा आनन्द कति बेला हुन्छ,अजम्बरध्वज खातीलाई ?
आफ्ना कृतीको बारेमा समालोचना पढ्न पाउदा,कृती समीक्षा पढ्न पाउदा,तपाइ जस्तै पत्रकार घरमा आएर अन्तरर्बाता लिंदा सबैभन्दा आनन्द आउछ नी ।कहिलेकांहि पुरस्कार पाउदा आनन्द लाग्छ ।
अहिले सम्म २० भन्दा बढि पुरस्कारहरुले सम्मानीत भएको छु।
१३.नेपाली साहित्यको बिकास कस्तो पाउनुहुन्छ भारतीय साहित्यको तुलनामा ?
तपाइले ठीक प्रश्न गर्नुभयो ,नेपाली र भारतीय साहित्यको शुरुवात लगभग संगै भएको हो । तर हाम्रो साहित्यले त्यति फड्को मार्न सकेन किनकी नेपालमा समालोचकहरु कम भए ।
बरु राजनीति गर्न थाले ,उनीहरुले नेपाली साहित्यको सहि रुपमा बिचार र बिश्लेषण गरेर लेखकहरुलाइ सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
१४.भारतीय साहित्य मैथली,भोेजपुरी,अबधि,कच्ची हिन्दी हुदै बिश्वभर प्रख्यात छ हैन त ?
होनी ,हामीले मात्रै चाहेर बिकास हुन सकेन, मुलुकका हरेक निर्णय गर्ने तहमा पनि साहित्यकारको उपस्थिती हुनुपर्छ बल्ल हामीले चाहेजति प्रगति गर्न सक्छौ ।
तपाइ जस्ता पत्रकारको भुमिका पनि त हो नी नेपाली साहित्यको बिकासका लागि कलम चलाउनुुप¥यो नी ।
१५. समालोचक नै नभएको नेपाली साहित्य लंगडो प्राय ःछ होइन ?
हो,बास्तबिकता नै यहि हो ।हाम्रा लेखकले के लेखेका छन् कस्तो लेख्नुपर्छ ,सबैकुरा समालोचकले बुज्नुपर्ने हो । तर कसैलाइ मतबल नहुदा समस्था थपिएको छ ।बेलाबेलामा समीक्षा होस्,चर्चा होस् अनि पो बल्ल राम्रो हुन्छ र ।
१६.नेपालको जनसंख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै छ तर प्रकाशन हुने कृतीहरुको प्रति (छाप्ने संख्या ) चांही किन घट्दै होला ?
मानीसहरु पढ्नै छाडे,कृतीहरुको प्रतिक्रिया नै आउन छाड्यो ।
पूस्तकहरु पनि छाप्नका लागि छापिन्छ , ५ सय प्रति वा २ सय प्रति छापिन्छ,जहा ३ करोड जनसंख्या पुग्न आंट्यो । अर्काे कुरा,सरकारले कविहरुका कृतीलाइ सबैठाउमा पुर्याउन हुलाक सेवालाइ बलियो बनाउनुपर्छ ।पत्रपत्रिका ,पुस्तकहरु मान्छेले पढ्नै पाएका छैनन् । बिक्रि बढाउनुपर्छ अब ,नत्र हुदैन ।
१७. लेखक बढे,कृती संख्या पनि बढे,तर गुणस्तर बढ्न नसक्नुको कारण के होला ?
संख्यात्मक बिकास भयो तर गुणात्मक हुन सकेन,मेरो पनि चिन्ता यहि हो । अहिलेका नया कवि जहाको तहिं छन् ।उनीहरु रहरले आए जानेर होइन ।नया पालुवाको स्तर सबैको एकै प्रकारको छ ।यस्तो भए अझै स्तर खस्कन्छ साहित्यको ।
१८.तपाइ जस्ता कविहरुलाइ राज्यले सहि ढंगले सम्झीएको छ ?
छैन,सबैभन्दा दुःख यहि निर लाग्छ,साहित्य सिर्जनामा कति मेहनत छ ।राज्यले कसैलाइ चिन्दैन । हामीलाइ प्रेरणा दिने काम कसैले गरेका छैनन । बरु परिवारका सदस्यकै सहयोगले यहासम्म् आइपुगें ।
१९. नया“ पुस्ताका साहित्यानुरागीहरुलाइ केहि सुझाब छ?
साहित्य बुझेर मात्र गर्नुस् ।देखासिकी गरेर होइन, यो क्षेत्रलाइ पनि राम्रो र बलियो बनाउनका लागि जुट्न अनुरोध गर्छु । नया पुस्ताको प्रेमबिछोडले मात्र कुनै समय सिर्जना कोर्ने र पछि हराउने धेरै छन् । अब यस्तो हुनेछैन आशा गर्छु ।साहित्य निरन्तर साधनाको प्रतिफल पनि हो ।
२०.अन्त्यमा केहि भन्नु छ की ?
धेरै धेरै धन्यबाद कपिल जी । मलाइ सम्झेर मेरै घरमा आएर मलाइ थप उर्जा प्रदान गर्नुभएकोमा । मलाइ अझै जांगर थपिदिनुभएकोमा तपाइ प्रति आभारी छु ।केहि कुरा राख्ने मौका दिनुभयो । एकदमै खुसी छु । धन्यबाद, तपाइ र तपाइको नागरिक आवाज डटकमलाइ पनि ।
एम्समा बिबिएस चौथो बर्षका बिद्यार्थीहरुलाइ बिदाइ
प्रहरी अपरेशन : अनिसको हत्यामा संलग्न ४ जना पक्राउ,तस्वीर सहित